မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း မောင်ဦး ရခိုင်လူထုကို ဘာတွေ ပြောခဲ့သလဲ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း မောင်ဦး ရခိုင်လူထုကို ဘာတွေ ပြောခဲ့သလဲ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရခိုင်ပြည်နယ် တာဝန်ခံ ယခင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဟောင်း နှင့် ရခိုင်တိုင်းမှူးဟောင်း ဦးမောင်ဦးသည် ၁၄. ၅. ၂၀၁၁ နေ့တွင် ပေါက်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မြို့မိ မြို့ဖများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
(ဦးမောင်ဦး၏ ပြောကြားချက်များကို ပေါက်တောမြို့နယ် ကြံ့ခိုင်ရေးရုံး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။)
တွေ့ဆုံးပွဲအခမ်းအနားတွင် ဦးမောင်ဦး ပြောကြားချက်
၁။ ဒီနေ့ လွှတ်တော်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ လွှတ်တော်တွေကို အာဏာအပ်နှင်းတယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ သိကြမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ လွှတ်တော်ကို အာဏာလွဲတာမဟုတ်ဘူး။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကိုပဲ အာဏာ လွဲအပ်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တက်ရောက်လာတဲ့ လူကြီးမိဘတို့ သိထားရမှာပဲ။ ယခုလက်ရှိသမ္မတဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကပဲဖြစ်တယ်။ သမ္မတဖြစ်သွားရင်တောင်မှ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ နှုတ်ထွက်စရာမလိုဘူး ဆိုတာ လူကြီးမင်းတို့ သိထားကြရမယ်။
၂။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မှာပဲ။ တပ်မတော်မှ အာဏာလွဲပြောင်းပေးတာဟာလည်း လွှတ်တော်ကို လွဲတာမဟုတ်ဘူး။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကို လွဲအပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားရမယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ တစ်ခုတည်းသော တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ့် ပါတီ ဖြစ်တယ်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ RNDP က အနိုင်ရသော်လည်း တောင်ပိုင်းမှာတော့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဘဲ နိုင်တယ်။ တောင်ပိုင်းသားတွေဟာ ရခိုင်အစစ်တွေ မဟုတ်ဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ ရခိုင်တွေဟာ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ထောက်ခံကြတယ်။ စာတွေ မဖတ်ကြဘူးလား၊ ဘယ်တော့မှမရဘူး ခင်ဗျားတို့ ရခိုင်တွေဟာ လူမျိုးစွဲ ဒေသစွဲတွေ ရှိနေကြတယ်။ သီးခြား သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်လို့တော့ မရဘူး၊ ရခိုင်တွေ ၂ သန်းခွဲလောက်ရှိတယ်၊ ကျန်တဲ့ သန်း ၆၀ ကိုတော့ ဆန့်ကျင်လို့ မရဘူး။ ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်တွေကလည်း လူမျိုးစု အင်အားတစ်ရပ်အဖြစ် ထူထောင်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် RNDP ပါတီဟာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှာ တစ်ယောက်မှ မပါဘူး။ ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့မှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကဘဲ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ယခု ကျွန်တော်နှင့် အတူပါလာတဲ့ ချင်းရေးရာဝန်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်း ဆိုတာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကပဲ ဖြစ်တယ်။
၄။ ရခိုင်တွေမကဘူး ချင်းတွေကလည်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ်တောင်းကြတယ်။ ချင်းတွေဟာ ဘာစာမှ မတတ်ဘူး။ ဘာဘွဲ့မှလည်း မရဘူး။ ဘာနိုင်ငံရေးမှ မသိဘဲနှင့် ဝန်ကြီးပေးလို့ ရမှာလား။ ဘွဲ့ကြီးတွေ တသီတတန်းနှင့် လူတွေကိုဘဲ ပေးတာပါ။ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းကို ဒုသမ္မတပေးတာဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ နှစ် ၁၀ လောက် ရှမ်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့လို့ ပေးတာဖြစ်တယ်။
၅။ ကျွန်တော်ဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တယ်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ထောက်ခံတဲ့ လူတွေကိုပဲ ခန့်အပ်ပါလို့ ပြောတာကို ယခု မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ ငွေယူပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကို အားမပေးတဲ့သူတွေ ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေကို ခန့်အပ် ထားတယ်။ "မိမိတို့ကို ထောက်မခံတဲ့သူကို ခင်ဗျားတို့အနေဖြင့် ခန့်မှာလား" ။ ဥပဒေနဲ့ လက်တွေ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး လုပ်ရတယ်။ အရာရာကို ဥပဒေနှင့် လုပ်လို့မရဘူး။ ပါတီစုံ ဆိုပေမဲ့ အခြေအနေအရ လုပ်ထားရတာပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကပဲ ဦးဆောင်သွားမှာပဲ။ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက စောင့်ကြည့်နေတယ်။
(၎င်းနေ့ မောင်ဦးသည် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး အခမ်းအနား တက်ရောက် လာသူများကို လက်ညိုးထိုးပြီးမေးမြန်း ပြောဆိုခဲ့သည်။)
၆။ ၎င်းနေ့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် အထက်ပါအပိုဒ် ၅ ထိ ပြောပြီးချိန်တွင် ပေါက်တောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တက်ရောက်နေသည်ကို တွေ့မြင်သွား၍ ဦးမောင်ဦးက မင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မဟုတ်ဘူးလား ဆိုပြီး မေးမြန်းကာ ယခုချက်ချင်း တွေ့ဆုံပွဲက ထွက်သွားဆိုပြီး နှင်ထုတ်လိုက်သည်။
၎င်းနောက်ပိုင်း မောင်ဦးက --- ဒီဘက်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မဲရှုံးတာ အဓိက မယက၊ ရယက၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ အသုံးမကျလို့ ရှုံးရတာပဲ။ ရခိုင်တွေ မဲဆွယ်စဉ်က ရခိုင်ပြည်မှာ တပ်မတော် မရှိရဘူး။ ကိုယ်မြေမှာ ကိုယ်လူမျိုးဘဲ အုပ်ချုပ်မယ်၊ ဗမာအုပ်ချုပ်တာ မခံဘူးဆိုပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒနှင့် စည်းရုံးနေခဲ့ကြတာ ကျွန်တော်ကြားရတယ်။
၇။ ၎င်းနေ့ နံနက် (၁၁း၃၀) နာရီတွင် မြို့မိ/ဖများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ထပ်လုပ်ပါသည်။
၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ လူတွေထဲမှာ ဗမာလူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက် ပါသလဲ ဆိုပြီး မေးမြန်းသည်။ မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှ မန်နေဂျာ ဦးရွှေကြိုင်အား ခင်ဗျား ကုလားလူမျိုး မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးမြန်းသည်။ ဦးရွှေကြိုင်မှ မိမိ ရခိုင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ရသည်။
Posted by အာဇာနည် at 7:25 PM